Maika ny tsy fandriampahalemana, vidim-piainana, ady tany… | NewsMada
Maika ny tsy fandriampahalemana, vidim-piainana, ady tany…
Par Taratra sur 23/11/2017
Raha tsy misy ny fiovana, anio, ny fifanatrehan’ny Antenimierampirenena sy ny governemanta. Hanao ahoana? Ahina ho fombafomba toy ny mahazatra. Hatramin’izao, tsy misy fiovana ny fiainam-bahoaka. Vao mainka miharatsy aza izany, indrindra amin’izay mampitaraina hatramin’izay.
Mahafadiranovana ny vahoaka amin’ny tsy fandriampahalemana. Tsy hita izay fiovana. Faramparany teo, nampanantena izay ho vokatry ny fampanjakana ny fandriampahalemana ao anatin’ny telo volana ny praiminisitra. Inona ny eo? Toa miverina sy mirongatra aza ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa.
Tofoky ny fampandriana adrisa ny vahoaka? Miharihary ny tsy fahatokisany ny mpitondra tamin’ny korontana noho ny hoe fisian’ny vaksinina pesta ireny, na toy inona fanazavana sy fanamarinan-tena. Fongana àry ve ny pesta? Mbola ao anaty tsy fifampitokisana ny raharaha. Tsy lazaina tsinona ny marina.
Ny tsy fahombiazana sy tsy fananana politika na paikady mazava no tsy ilazana ny marina? Na ny fiheverana mandrakariva ny vahoako ho zaza sy bado, manaiky lembenana hatrany: mitaraina am-boalohany fa mangina rehefa tratran’ny lazon’ady. Toy izany koa ny amin’ny fidangan’ny vidim-piainana tsy voafehy.
Ny amin’ny fandrobana sy ady tany indray, toa ny ao anaty fanjakana no anisan’ny fositra. Eo, ohatra, ny famelana ny vahiny hanjakazaka. Zava-doza koa ny fisian’ny kolikoly avo lenta. Vokany, ny vahoaka ifotony no mitondra faisana, na efa nanajary ny tany izao aza ny taranaka telo na efatra, ohatra.
Tena hiady mafy amin’izay mianjady amin’ny vahoaka izay àry ve ireo hoe solom-bavany sa vitan’ny fifanatrehana toy ny mahazatra ny raharaha? Hatramin’izay, raha ny resabe nandeha: saika ny fahazoana fiara 4 x 4 hatrany no anaovan’ny depiote sasany tambiny amin’ny fampandaniana volavolan-dalàna izao na izatsy.
Rahoviana vao mba hisy fanaovana tambiny ny fandaniana volavolan-dalàna, ohatra, amin’ny fiadiana tombontsoam-bahoaka? Mba hisy ny hoe tsy handany ny volavolan-dalana izao na izatsy, raha tsy jerena sy itadiavam-bahaolana aloha izay tena manahirana ny vahoaka. Toy ny tsy fandriampahalemana izany, ny vidim-piainana, ny ady tany…